Booliska Soomaaliya oo shaaciyey khasaaraha ka dhashay qaraxii Ceelgaabta - Bulsho News
Booliska Soomaaliya oo shaaciyey khasaaraha ka dhashay qaraxii Ceelgaabta
Muqdisho (Caasimada Online) – Afhayeenka ciidamada Booliska Soomaaliyeed, Cabdifitaax Aadan Xasan oo shir jaraa’id u qabtay wariyeyaasha ayaa faah faahin ka bixiyey khasaaraha ka dhashay qarixii is-miidaaminta ee maanta ka dhacay isgoyska Ceelgaabta.
Cabdifitaax Aadan ayaa xaqiijiyey in qaraxa uu fuliyey nin isa soo miidaamiyey, watayna gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa, wuxuuna sheegay inuu soo dhex-galay baabuur lagu baariyey koontaraalka laga galo madaxtooyada ee ku yaalla dhanka Beerta Nabadda.
Afhayeenka Booliska ayaa sidoo kale xusay in dadka ku dhintay qaraxan ay ku jiraan hooyo iyo labo caruur ah oo ay dhashay, kuwaas oo saarnaa gaari xilligaas marayey wadada.
Waxa kale oo uu tilmaamay in khasaaraha uu intaasi ka badan karo, isla-markaana ay weli wadaan tira koob ku aadan khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarka qaraxa ah.
Al-Shabaab ayaa dhinaca kale sheegatay mas’uuliyadda weerarkan, waxaana qoraal kooban oo ka soo baxay kooxda lagu sheegay in xilliga uu qaraxa dhacayey ay goobta ku sugnaayeen mas’uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Si kastaba, waa qaraxii labaad oo muddo 24 saac gudaheed ka dhacaya Muqdisho waxaana shalay mid kale oo is-miidaamin ahaa uu ka dhacay xarunta Villa Baydhaba ee Muqdisho.
Tijaabada hubka: Wax ka ogaw hubka ay Kuuriyada...
Muxuu CUMAR Cabdirashiid ku macneeyey arrinta ay ku...
Sergio Aguero Oo Dhaliyay Goolkiisiii Ugu Horeeyay Ee...